Toetra samy hafa ny Stainless Steel - China Richina
Toetra samy hafa ny Stainless Steel
Richina dia manokana ao amin'ny isan-karazany Stainless Steel Garden Tools, fa maro ny mpanjifa dia mety hihevitra izay karazana Stainless vy no ampiasaina ho an'ireto Garden Tools, Inona avy ireo toetra samy hafa ny Stainless vy?
Tsy ny rehetra Stainless vy dia avy amin'ny toetra iray ihany sy ny sangan 'asa. Arakaraka nikela sy Chrome eo am-pototry vy firaka, ny mafy kokoa sy mateza kokoa izany. Noho izany, dia lafo kokoa ny milina sy ny Poloney. Stainless vy flatware dia vita amin'ny iray amin'ireo hafa maro alloys. Ny tena fampiasa matetika alloys dia 304, 410, 420 sy 430.
Ankoatra ny vy, ny firaka 304 dia mirakitra ny mateza ny 18% Chrome sy ny malemy famirapiratany ny 8% nikela. Zavatra tsy mifangaro ny manan-karena sy ny nikela Chrome manome ambony indrindra harafesina sy ny harafesiny fiarovana. 18/8 Stainless dia raisina indrindra ary tena hita ao amin'ny tsara indrindra flatware Stainless vy. Tany Eoropa, ny fifehezan 18/10 no ampiasaina, izay mitovy amin'ny US fitsipika 18/8.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼The firaka 430 dia ahitana 18% Chrome ary tsy misy nikela. Fanolorana ny fomba ara-toekarena, 18/0 Stainless manana fijery ny manaitra sy mihevitra ny 18% Chrome, ary koa ny mateza, poloney avo farany. Manome tsara fanoherana ny harafesina sy ny harafesiny. 18/0 Stainless mihazona ny somary mavesatra tsara ny fampiasana ara-barotra, nefa tsy manome ny famirapiratany ny 18/8 maharitra.
410 Stainless vy firaka misy 13% Chrome ary tsy misy nikela. 13/0 Stainless vy manolotra hatsaran-tarehy amin'ny vidiny tsotra fa koa no kely indrindra sy mahatohitra ny harafesiny rusting. Tsy mety raha vidiny no fiheverana an-tampony.
Ny Garden Tools, anisan'izany Garden nandavaka fitaovana lehibe na Garden Small Hand Tools, dia vita amin'ny 420 firaka,
Izany avo-karbaona, 13% Chrome fitaovana Ny tena tsara mifanaraka amin'ny vary manorina sy ny vokatra eo amin'ny sisin'ny fanapahana maranitra.